मेक्सिकोको भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने? एक छोटो गाइड - ALinks
नोभेम्बर 18, 2021 एन्टिका कुमारी मेक्सिको, भिसा
मेक्सिको को यात्रा गर्न चाहने जो कोहि मेक्सिको को लागी एक भिसा को लागी आवेदन गर्न तीन विकल्प छ। यी विकल्पहरु मा निर्भर गर्दछ: तपाइँको राहदानी, भिसाहरु कि तपाइँको पासपोर्ट मा छन्, र अन्ततः अन्य निवास अनुमति छ कि तपाइँ पकड।
यदि तपाइँ एक उच्च आय देश वा ल्याटिन अमेरिकी देश बाट आउनुहुन्छ, तपाइँ सम्भवतः एक भिसा को आवश्यकता छैन, तर तपाइँ मात्र एक धेरै आप्रवासन फारम (FMM) प्राप्त गर्न को लागी आवश्यक छ। तिमीले यो गर्न सक्छौ यो मेक्सिकन सरकार पृष्ठ मा। तल थप विवरणहरू हेर्नुहोस्।
यदि तपाइँ रूस, युक्रेन वा टर्की बाट आउनुहुन्छ, तपाइँ 'Sistema de Autorización Electrónica' (SAE) मा अनलाइन भिसा को लागी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।, तिमीले यो गर्न सक्छौ यहाँ यो मेक्सिकन सरकार पृष्ठ मा.
अरु सबैलाई भिसा को लागी आवेदन दिन आवश्यक छ। यदि तपाइँ पहिले नै एक भिसा छ वा तपाइँ केहि अन्य विशिष्ट देशहरु को एक स्थायी निवासी हुनुहुन्छ, तपाइँ तल भिसा को आवश्यकता पर्दैन। एक आगन्तुक भिसा को लागी आवेदन गर्न को लागी, तपाइँ तपाइँको स्थानीय मेक्सिकन दूतावास बुकिंग प्रणाली को उपयोग गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ। तपाइँ तपाइँको भिसा प्राप्त गरे पछि तपाइँ अझै पनी गर्न आवश्यक छ एक FMM यो मेक्सिकन सरकार पृष्ठ मा.
एक कार्य भिसा को लागी एक आवेदन गर्न को लागी, तपाइँको राष्ट्रीयता कम प्रासंगिक छ। धेरै जसो अवस्थामा, तपाइँलाई पहिले एउटा जागिर खोज्न आवश्यक छ र त्यसपछि तपाइँ एक काम भिसा को लागी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
एक अध्ययन भिसा को लागी एक आवेदन गर्न को लागी, तपाइँको राष्ट्रीयता कम प्रासंगिक छ। अधिकतर अवस्थामा, तपाइँ एक मेक्सिकन विश्वविद्यालय मा भर्ना गर्न को लागी आवश्यक छ र त्यसपछि तपाइँ एक अध्ययन भिसा को लागी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
एक परिवार भिसा को लागी आवेदन गर्न। तपाइँ मेक्सिको मा एक परिवार को सदस्य को आवश्यकता छ तपाइँ संग आवेदन गर्न को लागी।
एलियन · टोक्सिक
मेक्सिको को लागी भिसा को लागी कसरी आवेदन गर्ने?
यदि तपाइँ मेक्सिको मा १ 180० दिन भन्दा कम बस्न चाहानुहुन्छ, तपाइँलाई तपाइँको राष्ट्रियता को आधारमा मेक्सिकन भिसा को लागी आवेदन दिन आवश्यक पर्दछ।
केहि पासपोर्टहरुलाई मेक्सिकन भिसा चाहिदैन तर मात्र एकाधिक आप्रवासन फारम (FMM)। यी पासपोर्ट ज्यादातर ल्याटिन अमेरिकी देशहरु वा उच्च आय देशहरु बाट छन्, तल पूरा सूची हेर्नुहोस्। तपाइँ एक FMM गर्न सक्नुहुन्छ यो मेक्सिकन सरकार पृष्ठ मा। तल थप विवरणहरू हेर्नुहोस्।
अरु सबैलाई भिसा को लागी आवेदन दिन आवश्यक छ। यदि तपाइँ पहिले नै एक भिसा छ वा तपाइँ केहि अन्य विशिष्ट देशहरु को एक स्थायी निवासी हुनुहुन्छ, तपाइँ एक भिसा को आवश्यकता छैन, तल थप विवरण हेर्नुहोस्।
यदि तपाइँ पहिले नै तपाइँको पासपोर्ट मा क्यानाडा, वा जापान, वा युनाइटेड किंगडम, वा कुनै सेन्जेन क्षेत्र देश बाट एक वैध भिसा छ भने तपाइँलाई भिसाको आवश्यकता छैन।
एक आगन्तुक भिसा को लागी आवेदन गर्न को लागी को दूतावास or वाणिज्य दुतको कार्यालय or सम्पर्क कार्यालय तपाईको नजिक
तपाइँ तपाइँको स्थानीय मेक्सिकन दूतावास बुकिंग प्रणाली को उपयोग वा एक भेट बुक गर्न को लागी कल गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ
मेक्सिको भिसा आवेदन फारम पूरा गर्नुहोस्
आवश्यक कागजात स collect्कलन गर्नुहोस्
आवेदन लागू गर्नुहोस् र शुल्क तिर्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको भिसा प्राप्त गरे पछि तपाइँ अझै पनी गर्न आवश्यक छ एक FMM यो मेक्सिकन सरकार पृष्ठ मा.
तपाईं मेक्सिको भिसाका लागि कहाँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ?
यदि तपाइँ मेक्सिको जान को लागी एक भिसा चाहिन्छ, तपाइँ एक मेक्सिकन दूतावास मा एक भिसा को लागी विदेश मा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाइँको निकटतम मेक्सिकन दूतावास को अनलाइन बुकिंग प्रणाली बाट शुरू गर्नुहोस्।
म मेक्सिको भिसाका लागि अपोइन्टमेन्ट कसरी बुक गर्न सक्छु?
एपोइन्टमेन्ट बुक गर्न, जानुहोस् sre.mx र तपाइँको खाता बनाउनुहोस्। र यहाँ ट्याप गर्नुहोस् रेन्डिजभस बुकिंग निर्देशनहरू फेला पार्न।
मेक्सिकोमा भिसाका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया तपाईले प्रयोग गर्नुभएको देशको आधारमा फरक पर्न सक्छ। विभिन्न मेक्सिकन दूतावास कार्यालयहरू तिनीहरूको अद्वितीय आवश्यकता हुनेछ। यसले भिसा शुल्क तिर्ने विधि, खुल्ने समय र अपोइन्टमेन्ट समावेश गर्दछ।
यही कारण हो कि एक दूतावास सम्पर्क पहिलो कदम हो जब मेक्सिको भिसा को लागी आवेदन। संसारभरि मेक्सिकन दूतावासहरु को एक सूची गर्न सक्नुहुन्छ भेट्टाउनुहोस् यहाँ.
मेक्सिको भिसा शुल्क कति छ?
मेक्सिकोका लागि भिसा शुल्क 36 XNUMX अमेरिकी डलर हो। तर, भिसा शुल्क तपाईंले भिसाको प्रकार र तपाईले आवेदन दिन लाग्नु भएको देशको आधारमा फरक पर्न सक्छ।
भुक्तानी को मोड प्राय देश बाट देश फरक हुन्छ, केहि को रूप मा तपाइँ कार्ड को माध्यम बाट अग्रिम तिर्न को लागी अनुमति दिन सक्नुहुन्छ, जबकि अन्य तपाइँ नगद मा तिर्न को लागी सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ अझै पनी मेक्सिको पर्यटक कार्ड को लागी तिर्नु पर्छ, जो $ 15- $ 30 बाट धेरै हुन सक्छ।
भिसा प्रशोधन समय:
तपाईंले आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंले मेक्सिको दूतावास वेबसाइट समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। साथै, तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको भिसा प्रक्रियामा लिन कती समय लाग्न सक्छ। यसको कारण यो हो कि सबै दूतावासहरु एउटै दर मा काम गर्दैनन्। त्यसैले जे होस् तपाइँ दुई दिन भित्र तपाइँको भिसा प्रशोधन गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, यो अर्को दस कार्य दिन लाग्न सक्छ। दूतावासले तपाइँको यात्रा भन्दा कम से कम चार हप्ता पहिले तपाइँको भेटघाट को व्यवस्था गर्न को लागी सुझाव दिन्छ।
मेक्सिको भिसाको अवधि के हो?
मेक्सिको को लागी एक पर्यटक भिसा को समय १ 180० दिन भन्दा बढी छैन। मेक्सिको को लागी अन्य भिसा को अवधि तपाइँ को पहुँच को कस्तो प्रकार मा निर्भर गर्दछ, तर सामान्यतया यो १ 180० दिन भन्दा बढी छ।
के तपाईंलाई मेक्सिको यात्रा गर्न भिसा चाहिन्छ?
सबैलाई भिसाको लागी आवेदन दिनु पर्दैन। यहाँ देशहरु को एक सूची हो जसका मानिसहरु मेक्सिको मा बिना भिसा बिना १ 180० दिन सम्म रहन को लागी जान सक्छन्।
युरोपेली संघ (EU) मा कुनै पनि देश
तपाइँ पनि तल जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ शीर्ष मा ड्रपडाउन सूची मा तपाइँको पासपोर्ट नागरिकता छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र पहेंलो भिसा आवश्यकताहरु बटन मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँ एक हरीयो वा रातो ब्यानर तल देखीरहनुभएको छ कि तपाइँ मेक्सिको को लागी भिसा को आवश्यकता मा निर्भर गर्दछ देख्नुहुनेछ।
मेक्सिको संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरु मध्ये एक हो। सबै मानिसबाट, यसको धूप समुद्र तटहरू वा यसको प्राचीन ऐतिहासिक साइटहरू भ्रमण गर्छन्। सांस्कृतिक घटनाहरू, वास्तुकला, र प्राकृतिक सौन्दर्यले यसलाई जाने ठाउँको भन्दा बढि बनाउँदछ। जे होस्, तपाईंको राष्ट्रियतामा निर्भर रहँदा तपाईले मेक्सिको भिसाका लागि अग्रिम आवेदन दिन आवश्यक पर्दछ।
मेक्सिको भिसा आवेदन भर्नुहोस्
तपाइँ दूतावास वेबसाइट मा तपाइँको आवेदन फारम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको मेशिन मा टाइप गरेर फारम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यसलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्। वा पढ्न योग्य टाइप अक्षर संग यो लेख्नुहोस्। पहिलो छनौट सधैं उपलब्ध नहुन सक्छ, त्यसैले दूतावास निर्देशनहरु पालना गर्नुहोस्।
मेक्सिको भिसाका लागि आवेदन दिन आवश्यक कागजातहरू प्रदान गर्नुहोस्। तपाईंसँग धेरै समर्थन कागजातहरू हुनुपर्दछ, जस्तै:
मेक्सिको भिसा आवेदन फाराम
तपाईंको पासपोर्ट (वा अन्य यात्रा कागजात) जुन कम्तिमा अर्को छ महिनाको लागि मान्य हो। र यसमा भिसा थप्न खाली पृष्ठहरू छन्
पर्याप्त प्रवासको प्रमाणको प्रमाण तपाईंको बसाईको अवधि कोष
फिर्ती टिकट बुक गरियो
यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईले प्रश्नहरूको उत्तर दिई जस्तो गरी:
तपाईंको नाम, जन्मदिन, लिंग, र जन्म स्थान
घर र ठेगानाको देश
तपाइँको जागिर वा पेशा को बारे मा विवरण
तपाइँ मेक्सिको किन यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारे मा प्रश्न
यदि आवेदक एक नाबालिग हो, कागजातहरु उनीहरुका आमा बुबा द्वारा हस्ताक्षर गरीएको छ
तपाईं आफैले मेक्सिकन भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यहाँ तर यदि तपाईंलाई आफ्नो भिसा आवेदनको साथ मद्दत चाहिन्छ भने तपाईं भरपर्दो भिसा सेवा मार्फत जान सक्नुहुन्छ VisaHQ or आईवीसा। तपाईको राष्ट्रियता र तपाईसँग भएको समयमा निर्भर गर्दै, एउटा सेवा अर्को भन्दा सुविधायुक्त हुन सक्छ।
आईवीसाको साथ मेक्सिकन भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
भिसाएचक्यूको साथ मेक्सिकन भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
मेक्सिको भिसा प्रकार
मेक्सिको भिसाका तीन मुख्य प्रकारहरू छन्तपाईको बसाईको समय अनुसार।
मेक्सिको पर्यटक भिसा १ 180० दिन अवधिको लागि प्रदान गरिएको छ। यी भिसा प्राय: यात्रा वा मेक्सिकोमा प्रवेश गर्नका लागि हुन् वा अन्य कुनै कारणले जुनमा रोजगार समावेश छ।
अस्थायी निवासी भिसा मेक्सिकोमा प्रवास गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूलाई दिइन्छ। यो छ महिना भन्दा लामो अवधिमा तर चार बर्ष भन्दा कमको लागि। अस्थायी स्थायी भिसा समावेश गर्दछ काम भिसा र परिवार भिसा।
मेक्सिको स्थायी निवासी अनुमति मेक्सिकोमा बस्न चाहने विदेशीहरूको लागि हो। यस किसिमको भिसा मेक्सिकोमा स्वतन्त्र आम्दानीका साथ निवृत्त अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको लागि सामान्य छ। यस भिसालाई मेक्सिकोको निवृत्ति भिसा पनि भनिन्छ। कम्तिमा चार बर्ष अस्थायी बासिन्दाको रूपमा मेक्सिकोमा बसोबास गर्ने विदेशीहरू मेक्सिकोमा स्थायी निवासको लागि पनि योग्य छन्।
अस्थायी निवासी भिसा आवश्यकताहरु
मेक्सिकोबाट अस्थायी निवासी भिसा भनेको तपाईले पठाउनु भएको अनुमति प्रकार हो जुन तपाई मेक्सिकोमा रहन चाहानुहुन्छ। यो छ महिना भन्दा बढीको लागि हो, तर चार बर्ष भन्दा पनि कम। त्यस्तै रूपमा तपाईले मेक्सिकोको यात्राको कारणको कागजात प्रयोग गर्नु पर्छ, जस्तै:
शिक्षा को एक मेक्सिकन संस्था मा नामांकन; वा
रोजगार अनुमति र रोजगार सम्झौता; वा
एक मैक्सिकन निवासी वा व्यक्ति संग पारिवारिक सम्बन्ध को प्रमाण
कसलाई मेक्सिकन विद्यार्थी भिसा चाहिन्छ?
कुनै पनि विदेशी जसले मेक्सिकोमा १ 180० भन्दा बढी दिन अध्ययन गर्ने योजना बनाइरहेको छ उसले मेक्सिकोबाट विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिनै पर्दछ। मेक्सिको विद्यार्थी भिसा दुई प्रकारका हुन्छन्:
अस्थायी निवासी विद्यार्थी भिसा भनेको १ 180० दिन भन्दा बढिको कोर्स गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि हो।
विद्यार्थी भिसा अतिथि १ students० दिन भन्दा कमको पाठ्यक्रम लिने विद्यार्थीहरूको लागि हो।
मेक्सिको मा एक विद्यार्थी भिसा को लागी कसरी आवेदन गर्ने?
तपाइँ मेक्सिको दूतावास मा मूल र प्रतिलिपि मा निम्न कागजात पेश गर्नु पर्छ:
मेक्सिकोमा भिसाका लागि आवेदन पूर्ण भयो र हस्ताक्षर गरियो
तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको कुनै पनि अनुमति र टिकटहरूको फोटोकपीहरू)
पासपोर्ट आकारको फोटो पछिल्लो months महिनामा सेतो पृष्ठभूमिमा लिइएको।
उडानको लागि बुक गरिएको टिकट (होईन जरूरी किनेको)
तपाईंको शैक्षिक संस्थाबाट स्वीकृति पत्र, मेक्सिकोको दूतावासमा पठाइएको, यो समावेश गर्दै:
अध्ययन चरण, डिग्री, र क्षेत्र तपाईं लिनुहुनेछ
तपाईको पाठ्यक्रमको नाम ल्याइयो मा
सुरु हुने र अन्त्य हुने मिति सहित समयावधि
शिक्षण शुल्कको लागत, र यदि तपाईंले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुभयो।
विद्यालयको सम्पर्क विवरण
पछिल्ला तीन महिनामा बैंक घोषणाहरू वा लेनदेन
तपाईको बसाई खर्च गर्नका लागि वित्तीय साधनको प्रमाण आवश्यक छ, जस्तै:
प्रमाण छ कि तपाईले एक महिनामा कम्तिमा $ 400 अमेरिकी डलरको तलब पाउनुहुन्छ
प्रमाण तपाईं बचत वा बचत बनाउन
तपाईले पाउनुभएको छात्रवृत्तिको प्रमाण
यदि तपाईं नाबालिग हुनुहुन्छ भने: तपाईंको जन्म प्रमाणपत्र र अभिभावक वा कानूनी अभिभावकको नाम प्रदान गर्नुहोस्।
यदि तपाईं देशको नागरिक हुनुहुन्न भने, त्यसोभए तपाईं हाल अवधारणामा बस्नुहुन्छ। कानूनी घरको कागजात प्रदान गर्नुहोस्, जस्तैaआवास अनुमति
विद्यार्थीहरूको लागि भिसा आवेदन शुल्क
मेक्सिकोको पारिवारिक भिसाका लागि आवश्यकताहरू
मेक्सिकोको लागि पारिवारिक भिसाका लागि आवेदन दिँदा कागजातहरू तपाईंले पठाउनु पर्छ:
मेक्सिकोमा भिसाका लागि आवेदन भर्नुहोस्।
तपाईंको पासपोर्ट र आवश्यक पृष्ठहरूको फोटोकपीहरू। यसले पहिलो र अन्तिम पृष्ठ समावेश गर्दछ, कुनै भिसा, र टिकटहरू तपाईले प्राप्त गर्नुभयो
उडानको लागि बुक गरिएको टिकट
पारिवारिक सम्बन्धको प्रमाण, जस्तै:
जीवनसाथी / साझेदार विवाह प्रमाणपत्र वा साझा-कानून संघको प्रमाण
जन्म प्रमाणपत्र, जसले बच्चा, आमा बुबा, वा भाईबहिनीको लागि पारिवारिक सम्बन्ध प्रमाणित गर्दछ
यदि तपाईंको परिवारको सदस्य एक निवासी कार्ड होल्डर हो: तिनीहरूको निवासी कार्ड मूल र प्रतिलिपि
यदि तपाईंको परिवारको सदस्य एक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी हो। त्यसोभए उनीहरूको स्कूलको चिठीबाट उनीहरूको दर्ता प्रमाणीकरण गर्दै
पछिल्लो १२ महिनाको बैंक स्टेटमेन्टद्वारा वित्तीय घुलमिल प्रमाण। यसले payslips वा बचत समावेश गर्दछ।
मेक्सिको परिवार भिसाका लागि शुल्क
मेक्सिकन दूतावासले माग गरेको कुनै पनि अतिरिक्त कागजात
मेक्सिको पर्यटक कार्ड के हो?
मेक्सिको पर्यटक कार्ड, FMM (Forma Migratoria Múltiple) नाम, एक अनिवार्य प्रविष्टि आवश्यकता हो। सबै विदेशी नागरिकहरु को लागी पर्यटन उद्देश्य को लागी मेक्सिको को यात्रा।
मेक्सिकन प्राधिकरणले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्‍यो सबै आगन्तुकहरूको रेकर्ड कायम राख्न।
एफएमएम गर्न सक्छन् द्वारा प्रयोग एकल प्रवेशका लागि हवा वा भूमि। र अध्यागमन छापको समयदेखि १ 180० दिनको लागि मान्य छ स्ट्याम्प गरिएको छ तपाइँको यात्रा कागजात मा, मेक्सिको मा आगमन मा।
यदि तपाइँ मेक्सिकोको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा यसको कुनै एक भूमि सीमा पार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पर्यटक कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बस यात्रा गर्नु अघि साधारण अनलाइन आवेदन फारम भर्नुहोस्।
यसमा व्यक्तिगत डेटा, यात्रा कागजातहरूको विवरण पठाउन समावेश छ। र साथै मेक्सिको को अपेक्षित यात्रा को बारे मा जानकारी। अन्तिम फारम प्रिन्ट गर्न केहि मिनेट लिन्छ।
अधिकृत एफएमएम हुनु पर्छ द्वारा पठाइन्छ आवेदकलाई ईमेल गर्नुहोस्। यो हुनेछ छाप्नु पर्छ र सीमा नियन्त्रण मा प्रदर्शित।
मेक्सिकन पर्यटक कार्ड गर्न सक्छन् प्रयोग गर्नुहोस् मेक्सिको भ्रमण गर्न केवल पर्यटन र मनोरंजन उद्देश्यको लागि। यसले होल्डरलाई यस क्षेत्रमा काम गर्न वा रोजगारी लिन अधिकार दिदैन।
एफएमएम भिसा होइन। मेक्सिकोको भिसाका लागि आवेदन दिन अयोग्य ठहरिएका देशका यात्रीहरूले पनि मेक्सिको टुरिस्ट पासपोर्ट लिनु पर्छ। एक एफएमएम बाहेक, नागरिकहरूले मेक्सिकोको पर्यटकको रूपमा भ्रमण गर्न उपयुक्त भिसाका लागि पनि आवेदन दिन सक्छन्।
सबै पर्यटकसँग एफएमएम हुनु पर्छ, बच्चाहरू सहित। तिनीहरूको तर्फबाट, अभिभावक वा कानूनी अभिभावकहरूले आवेदन भर्दछन्।
देखाइएको अनुसार तपाई आफैले मेक्सिकन भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईलाई भिसा आवेदनका लागि सहयोग चाहिएको छ भने तपाई विश्वसनीय भिसा सेवा मार्फत जान सक्नुहुन्छ। VisaHQ or आईवीसा। तपाईको राष्ट्रियता र तपाईसँग भएको समयमा निर्भर गर्दै, एउटा सेवा अर्को भन्दा सुविधायुक्त हुन सक्छ।
मेक्सिको पर्यटक कार्डमेक्सिको भिसाका लागि आवाश्यकताहरू
साइप्रस बाट टर्की भिसा
घाना को लागी एक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
सिरिया भिसा आवश्यकताहरू जान्न चाहनुहुन्छ? यहाँ जाँच गर्नुहोस्!
सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा वा मेक्सिको सिटी मा अस्पतालहरु
कोलम्बियामा कसरी काम पाउने?